အမသက်ဝေက တက်ဂ်ထားတယ်ဆိုလို့ အချစ်ဆိုသည်မှာကို ရေးလိုက်ပါတယ်။ အချစ်ဆိုသည်မှာ ဆိုတော့ အဓိပ္ပါယ်တွေဖွင့်ရတော့မှာပေါ့လေ။ အဲသလိုတွေ အဓိပ္ပါယ်တွေဖွင့်ရမှာကိုတော့ တကယ်တော့ မရဲပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ်ထင်တာကိုယ်ရေးလိုက်မယ်လို့ပဲ စိတ်ထဲထားပြီး ရေးလိုက်ပါတယ်။ ဘော်ဘော်တို့လိုချင်တဲ့ လိုရင်းကို မရောက်ခဲ့ရင်လည်း ဆောတီးလို့ ပြောပါရစေ။
အချစ်လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ကျနော်က တခြားဟာတွေကိုပါ တွဲပြီးပြောချင်တာပါ။ ချစ်တာထဲမှာ မေတ္တာပေးတာတွေ၊ သစ္စာထားတာတွေ၊ အနစ်နာခံတာတွေ၊ ကူညီခံစားပေးတာတွေ၊ နားလည်မှုပေးတာတွေ ….. … .. ပါ ပါလာမှ အချစ်ဆိုတာ ပြည့်စုံမယ်ထင်ပါရဲ့။ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်အကြောင်းကို ပြောမယ်ဆိုရင် နှစ်ယောက်ကိစ္စဟာ တစ်ယောက်တည်းကိစ္စလို ခံစားနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ အတော့်ကို ချစ်နေပြီလို့ထင်မိပါတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့စံနှုန်းထားတွေ မကိုက်ညီလို့ မချစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လည်း အဲသလို အချစ်က တမျိုးကြီး ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ချစ်မိသွားရင် စံနှုန်းထားတွေကလည်း ကျိုးပြတ်သင့်သလောက် ကျိုးပြတ်သွားတာမျိုး၊ မကြိုက်တာတွေကလည်း ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့ စာရင်းမျိုးထဲ ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ပြောချင်တဲ့ အချစ်ဆိုသည်မှာ ကတော့ … လူတစ်ယောက်က လူအများအတွက် အနစ်နာခံပြီး ကျင့်ကြံနေထိုင်၊ ဟောပြော သွင်သင်၊ နည်းမှန်လမ်းမှန်ကို ပြတာမျိုးပါ။ သူကတော့ တဦးတယောက်ကို ချစ်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ လူသားအများကို ချစ်တာမျိုးဆိုတော့ အတော့်ကိုလည်း ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ပါတယ်။
လူအများကလည်း သူတို့ကို တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် သူတို့ ပြောတာတွေ၊ ပေးခဲ့တဲ့ နည်းတွေကို တကယ်လိုက်လုပ်ရမှာပါ။ လေးစားလောက်အောင် စံနမူနာထားလောက်အောင် နေ(နေ)သွား၊ ကျင့်(နေ)သွား၊ ချစ်(နေ)သွားတဲ့ သူတွေကိုလည်း တန်ဖိုးထားမိပါတယ်။
ကဲ ..အမသက်ဝေရေ သတိတရ တက်ဂ်လို့လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by ဇနိ at 3:01 PM
Republic October 11, 2008 at 3:36 PM
အချစ်ဆိုသည်မှာ = ကိုကိုနိ + မမနိ
အဲလိုပဲ ကော်မန့် ရေးပေးတတ်တယ် ၊၊ ကိုနိ မနိ .. ကွိကွိ
May Moe October 11, 2008 at 3:56 PM
အချစ်ဆိုသည်မှာ = မောင် + မေမိုး လဲပါ ပါတယ် ကိုဂျီးဂီ ရဲ့ :P :P :P
khin oo may October 11, 2008 at 7:39 PM
Kmsl + kom
ကိုကြီးဂီ + ဖျူးချား ဂီ လည်းပါပါကြောင်း။
khin oo may October 11, 2008 at 7:43 PM
ကိုနိ ဆိုလိုချင် တာက တော့ သူ က မနိ ကို ချစ်တဲ့ အတွက်ကြောင်. နည်ပေး လမ်းပြ လုပ် မှာ ဖြစ် သလို.မနိ ကိုလည်း လိုက် နာစေချင် လို့ ။ မယားနေစ ကြောင်သေမှ ဖြစ် ဘို. အတွက် ကြို တင် ဟင်.စ် hints တွေ ပေးနေတာပါ။ မနိ သတိထားရန် တင်ပြ အပ် ပါသည်။ ယောက်ကျားတို.မာယာ သဲကိုးဖြာပါ အမိ။
မောင်ဖြူ October 12, 2008 at 10:41 PM
love ဆိုသည်မှာ любовь,
အင်း любовь ဆိုသည်မှာ သိတော့ဘူး. ဟီးဟီး
ကျွန်တော်သိတဲ့အချစ်ကတော့ first year ကနေ final year အထိ ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေခဲ့တဲ့.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ဟီးဟီး ကျွန်တော့်ရောင်းယင်းကြီး ဆရာချစ် (ခ) ကိုချစ်စရာကိုပြောတာနော်။ ကိုနိနဲ့မနိ မဟုတ်တာတွေလျှောက်တွေးမနေနဲ့။
သက်ဝေ October 14, 2008 at 9:10 AM
ကိုနိ နဲ့မနိတို့ ရေ...
ရေးပေးတာ ကျေးဇူး အထူးတင်ပါ၏။ ရေးထားတာတွေကလဲ တစ်ကယ်မှန်ပါ၏။ အချစ်ဆိုတာ... ချစ်နေရုံ တစ်ခုထဲနဲ့မပြီးဘူး၊ နောက်ဆက်တွဲတွေ အဖြစ်နဲ့မေတ္တာပေးတာတွေ၊ သစ္စာထားတာတွေ၊ အနစ်နာခံတာတွေ၊ ကူညီခံစားပေးတာတွေ၊ နားလည်မှုပေးတာတွေ ....
အင်း... အများကြီးဘဲလေ... နော်..။
ချမ်းမြေ့သော ချစ်ခြင်း ကိုယ်စီရှိနိုင်ကြပါစေ...။
မောင်မျိုး October 14, 2008 at 12:54 PM
ကိုကြီးဝီ ပြောသလိုပဲ ကျနော်သိတဲ့ အချစ်ဆိုတာ ကိုနိ( ကာဗွန်) + မမနိ ( အောက်ဆီဂျင်) တို့ ရဲ့အချစ် မီးသွေးပါခင်ဗျား)
Kay October 14, 2008 at 5:30 PM
ကိုဇနိ တို့ဆီက..အချစ်က..မပြီးသေးသလိုနဲ့ ပြီးသွားပါလား။ ဆက်ဖတ်၇န် များ ရှိသေးလား လို့တောင်..မှားကလစ်နေ မိတယ်။ အကုန် ထုတ်မပြသေးဘူးထင်တယ်။
ကဲ- ၀ါ လကင်းလွတ် ပြီမို့- လုပ်စရာ ရှိတာ မြန်မြန်-း)
nu-san October 18, 2008 at 6:15 AM
ကိုဇနိတို့ မဇနိတို့ရဲ့ အချစ်က နောက်မှ အသေးစိတ် ထပ်ရှင်းမှာမို့လား.. ဆက်ရန်ရှိသေးတယ်.. ဟုတ်.. စောင့်နေမယ်..:)